Sidee Looga Faa'iidaystaa Kooxaha TweetDeck On Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee looga faa'iideysan karaa Kooxaha TweetDeck ee Twitter?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 380
Noocyo badan oo xisaab ah ayaa ka shaqeeya gudaha shabakadda. Midka ugu weyni waa koontada madadaalada ee qofku yeelan karo maalintiisa maalinba maalinta ka dambaysa, iyada oo aan ujeeddo kale laga haynin inuu la socdo wararka ama waayaha saaxiibbadood. Waxaa sidoo kale jira xisaabaadka dadka u adeegsada ujeeddooyin saameyn.
Ugu dambeyntii, waxaad heli doontaa xisaabaadka suuq-geynta dijitaalka ah, halkaas oo shaqsiyaadka iyo shirkadaha ay ku xayeysiiyaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Kooxdan xisaabaadka ugu dambeysa, shirkadaha shabakadaha bulshada waxay u sameeyeen xoogaa qalab ah oo lagu maareeyo nashaadaadka noocan ah.
On Twitter, muuqaalkan waxaa loo yaqaan TweetDeck iyo kooxda dadka maamula akoonadaas waxaa loo yaqaan TweetDeck Teams
Maxay yihiin Kooxaha TweetDeck?
Muuqaalka TweetDeck ee Twitter-ka ayaa shaqadiisa bilaabay sanadkii 2008. Tan waxaad ku maamuli kartaa koonto koox dad ah oo aad ku kalsoon tahay, adigoon la wadaagin lambarka sirta ah.
Habkaani wuxuu ku habboon yahay koontooyinka ganacsiga ee dad badani ay tahay inay galaan. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah xubnaha ayaa leh rukhsad si uu u awoodo inuu qabto dhammaan howlaha koontada, laakiin inta soo hartay waxay u shaqeyn karaan taageero ahaan.
Waa maxay doorka ay Kooxaha TweetDeck leeyihiin?
Nidaamku wuxuu u qaabeeyey saddex nooc oo door ah Kooxahan:
Mulkiilaha, oo laga yaabo inuu ahaa abuuraha koontada, ayaa maareeya furaha, lambarka taleefanka iyo macluumaadka kale ee looga baahan yahay inuu furo koontada. koonto
Maamuluhu wuxuu ku casuumayaa xubnaha kale Kooxda oo samee ficilada Twitter sida Tweeting, Retweeting, Messaging, Bookmarking, Like iyo kuwo kale oo badan ayagoo ku hadlaya magaca kooxda.
Tani waxay sidoo kale siinaysaa rukhsadda kuwa kale Member, sidaa darteed waxay la wareegeysaa mas'uuliyadda ficillada ay fulinayaan.
Maamulaha, kaasoo siiya rukhsad marin loogu helo xubnaha kale, oo iyaga ku matalaya isla ficilada kor lagu sharaxay, laakiin ma xamili karo erayga sirta ah.
Wada-shaqeeyaha, kaasoo kaliya ku metelaya Kooxda isla falalkaas, laakiin wax fasax ah ma bixin kartid.
Sideen ku abuuri karaa Kooxaha TweetDeck?
Si aad u bilowdo, u tag tweetdeck.twitter.com oo gal. Haddii aad horey ugu soo gashay Twitter, uma baahnid inaad markale ku sameyso barta TweetDeck.
Dhinaca bidix ee shaashadda, waxaad ku arki doontaa sadar leh fursado dhowr ah, xagga hoose ee sadarkaan waxaad ka heli doontaa astaanta "Xisaabaadka"
Tab ayaa isla markiiba la soo bandhigi doonaa, halkaas oo aad ka heli doonto macluumaadka koontadaada, magacaaga hoostiisa waxaad arki doontaa inaad leedahay cinwaanka "Maamul koox".
Waxaad heli doontaa astaan "Iskuxir akoon kale oo aad leedahay", inaad raacdo akoonada kale ee adigu iska leedahay.
Adoo riixaya "Maamul koox" waxaad ku dari kartaa xubnaha kooxda, maaddaama qayb kale oo ka mid ah menu-ka lagu soo bandhigi doono sanduuqa "Ku dar xubin ka tirsan kooxda". Ku qor magaca isticmaalaha koontada. Xaqiiji taabashada adoo gujinaya astaanta muuqaalka iskutallaabta.
Waad riixi kartaa "Tallaabada xaqiijinta" ka hor intaadan bilaabin adeegsiga TweetDeck Team.
Waxaad ka heli kartaa dhamaadka safka TweetDeck astaanta maareynta oo leh fursado dhowr ah: "Qoraallada sii deynta", "toogashada kiiboodhka", "Tilmaamaha raadinta", "Dejinta" iyo "Ka bax".
1 Maxay yihiin Kooxaha TweetDeck?
2 Waa maxay doorka ay Kooxaha TweetDeck leeyihiin?
3 Sideen ku abuuri karaa Kooxaha TweetDeck?
Sidee loola xiriiri karaa xisaabaadka Twitter?
Sideen ku ogaan karaa inta macaamiil ee aan ku leeyahay YouTube-ka?